१९ औँ सार्क स्तरीय सम्मेलन तोकिएकै समयमा गर्नुपर्ने « News24 : Premium News Channel
१९ औँ सार्क स्तरीय सम्मेलन तोकिएकै समयमा गर्नुपर्ने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पराष्ट्र सल्लाहकार डा. ऋषि अधिकारीले १९ औँ सार्क स्तरीय सम्मेलन तोकिएकै समयमा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले नेपाल आतंकवादको विरुद्धमा रहेको बताउँदै भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध मिलेर भएपनि तोकिएको समयमै सार्क सम्मेलन हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा डा. ऋषि अधिकारीले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंवादको विरुद्धमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भारत–पाकिस्तानवीचको बढ्दो तनावलाई लिएर नेपालले अहिले नै बोल्न नमिल्ने तर सार्कको अध्यक्षको हैसियतले तोकिएको समयमै सम्मेलन हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी डा. अर्थविद विश्वम्भर प्याकुरेलले सार्कलाई अहिलेसम्म भारतले नै नेतृत्व दिएकोले भारतविनाको सार्कको कुनै अस्तित्व नै नहुने बताउनुभयो । उहाँँले नेपाल सार्क राष्ट्रको अध्यक्षको हैसियतमा भएकोले अहिले सन्तुलित एवम् प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
साक्षात्कारमा पराष्ट्रविद डा. निश्लनाथ पाण्डेले सार्क मरणासन्न स्थितिमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भारत–पाकिस्तान तनावका कारण अहिले सार्क सम्मेलन अन्यौलमा रहेको र माहोल बुझदा भारतले सार्कलाई त्यति महत्व नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा परराष्ट्रविद पाण्डेले भारत पाकिस्तानको विषय संवेदनशील भएकोले सरकारले सन्तुलित तरिकाले सार्कको विषयमा कुरा उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।